Wild cherry (ချယ်ရီရိုင်းပင်) - Hello Sayarwon
Wild cherry (ချယ်ရီရိုင်းပင်)
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Wild cherry (ချယ်ရီရိုင်းပင်)
Wild cherry (ချယ်ရီရိုင်းပင်) ကဘာလဲ။
ချယ်ရီရိုင်းပင် ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Wild cherry (ချယ်ရီရိုင်း) ဟာ အပင်တမျိုး ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ အခေါက်ကြောကို ဆေးဝါးအဖြစ် သုံးစွဲလေ့ရှိကြပါတယ်။ အောက်ပါရောဂါတွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၎င်း၏ ငိုက်မျဉ်းစေခြင်း၊ချွဲပျော်စေခြင်း၊ချောင်းဆိုးသက်သာစေခြင်း စသည့်အာနိသင်များကြောင့် ချယ်ရီရိုင်းကို ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးရည်များတွင်လည်း ဟည့်သွင်းအသုံးပြုလေ့ရှိပါသည်။
ယခု ဆေးဖက်ဝင်အပင် ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာ သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့ လေ့လာမှုတွေ မပြုလုပ်ရသေးပါ။ အသေးစိတ် ထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် သဘာဝဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းပါ။ ဒါပေမယ့် ချယ်ရီရိုင်းပင်မှာ ပါဝင်တဲ့ ဓါတ်ပစ္စည်းတမျိုးဟာ ရောင်ရမ်းခြင်းတွေကို လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး တစ်ရှူးတွေကို ကျုံ့စေနိုင်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိရှိတာကိုတော့ လေ့လာချက်တွေအရ သိရှိရပါတယ်။
ချယ်ရီရိုင်းပင် အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ချယ်ရီရိုင်း သို့မဟုတ် အခြားဆေးများ သို့မဟုတ် သဘာဝဆေးဖက်ဝင်အပင်များနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းများရှိလျှင်။
ချယ်ရီရိုင်းပင် က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နဲ့ ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ ချယ်ရီရိုင်းကို သုံးစွဲခြင်းဟာ စိတ်ချရမှုရှိမရှိနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုံလောက်တဲ့ အချက်အလက်များ မရှိသေးပါ။ ဒါကြောင့် စိတ်ချရအောင် မသုံးဘဲနေတာ အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ချယ်ရီရိုင်းပင် ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
ချယ်ရီရိုင်းပမာဏအနည်းငယ်ကို ကာလတိုသုံးစွဲမယ်ဆိုရင် ဘာအန္တရာယ်မှမရှိနိုင်ပေမယ့် ပမာဏအများအပြားကို ကာလကြာရှည်သုံးစွဲမယ်ဆိုရင်တော့ အသက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်လောက်တဲ့အထိ အဆိပ်သင့်စေပါလိမ့်မယ်။
ချယ်ရီရိုင်းပင် ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
wild cherry ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေ ဒါမှမဟုတ် လက်ရှိခံစားနေရတဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် မသုံးစွဲခင်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ ဦးစွာ တိုင်ပင်ရပါမယ် (အထူးသဖြင့် အသည်းကနေ ချေဖျက်ပြောင်းလဲပေးရတဲ့ ဆေးတွေကို သင့်အနေနဲ့ သုံးစွဲနေရင်)။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ချယ်ရီရိုင်းက အဆိုပါဆေးတွေရဲ့ အာနိသင်နဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ပိုလာစေနိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။lovastatin (Mevacor), ketoconazole (Nizoral), itraconazole (Sporanox), fexofenadine (Allegra), triazolam (Halcion) တို့အပါအဝင် အခြားသော ဆေးများစွာကို အသည်းကချေဖျက် ပြောင်းလဲပေးရပါတယ်။
ချယ်ရီရိုင်းပင် အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
ချယ်ရီရိုင်း လက်ဖက်ရည်ကြမ်း :
ရေနွေးပူပူတခွက်ထဲမှာ ချယ်ရီရိုင်းအခေါက် လက်ဖက်ရည်ဇွန်းနှစ်ဇွန်းစာကို ထည့်ပြီး ဆယ်မိနစ်လောက် အရင်နှပ်ပြီးမှ သောက်ရပါမယ်။ တနေ့ကို အကြမ်းဖျဉ်း သုံးခွက်လောက်သောက်ရင် အန္တရာယ်မရှိပါဘူး။
ချယ်ရီရိုင်း တင်ချာ :
အပင်ရဲ့ ဘယ်အပိုင်းကမဆို ရရှိတဲ့ တင်ချာ အစက် ၃၀ – ၆၀ လောက်ကို တနေ့သုံးကြိမ်လောက် အသုံးပြုပေးမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေပါတယ်။
(လိုအပ်လျှင် လိုအပ်သလို) နှစ်နာရီခြားတခါ သောက်ပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ စားပွဲတင်ဇွန်းတဇွန်း (၁၅စီစီခန့်) သောက်နိုင်ပါတယ်။၂၄နာရီအတွင်းမှာ ခြောက်ကြိမ်ထက် ပိုမသောက်ရပါ။
မနက်တခါ၊ညနေတခါ လိမ်းပါ သို့မဟုတ် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း သုံးစွဲပါ။ ဂွမ်းစိုစိုလေး ဒါမှမဟုတ် သင့်လက်ထိတ်လေးတွေကို သုံးပြီး လိုအပ်တဲ့ နေရာကို လိမ်းပေးပါ။ ပြီးရင် ဆေးလိမ်းထားတဲ့ နေရာကို အသာအယာ ပွတ်သပ်နှိပ်နယ်ပေးပါ။
လူနာတယောက်နဲ့ တယောက် သုံးစွဲရမယ့် ဆေးပမာဏက တူချင်မှ တူမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အသက်အရွယ်၊ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ အခြားရောဂါတွေ ရှိမရှိပေါ်ကို မူတည်ပြီး ဆေးပမာဏ ကွာခြားပါလိမ့်မယ်။ ဒီဖြည့်စွက်အားဆေးတွေဟာ အမြဲတမ်းလုံခြုံစိတ်ချရတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သင့်လျော်တဲ့ ဆေးပမာဏကို သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ကြိုတင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရပါမယ်။
ချယ်ရီရိုင်းပင် က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
ချယ်ရီရိုင်းကို ဘယ်လို ပုံစံတွေနဲ့ ရရှိနိုင်သလဲ။
Wild-Cherry. https://www.planetherbs.com/michaels-blog/wild- cherry-one- of-the-
great-north- american-herbs.html. Accessed December 14, 2016
ry. Accessed December 14, 2016
ချောင်းတဟွတ်ဟွတ်အသံ မသက်သာရတဲ့ အကြောင်းရင်း (၈) ခု